Inkampani Edala Yamafayela Yasenkampini Yokuguga kanye ne-LLC Legal Disclaimers
Ifakwe ngokushesha ngeminyaka yokugcina umlando. Dlulisa amehlo kwi-inventri enkulu kunazo zonke yezinkampani zamashalofu ezineminyaka engu-5 ubudala "zigcwaliswa ngaphambili" nezinkampani ezithengiswayo. Zonke izinhlaka zebhizinisi zikimi kahle ngokulungiswa, kokubuyiselwa noma okulinganayo. Igama lebhizinisi lingashintshwa ngemali encane.
Inkampani Yabantu Abadala beShelf ne-LLC Nezihlangululo
Njengoba sesishilo kuso sonke lesi sigaba, lapho sisebenza “eshalofini” noma inkampani “endala” noma i-LLC sincoma ukwethembeka, ubuqotho kanye nokudalulwa okugcwele ngosuku okutholwe ngalo ibhizinisi. Ibhizinisi elinjalo angeke linyuse amandla omnikazi wokubhida kuzinkontileka zikahulumeni. Kungenzeka kunganikeli abanikazi ukufinyelela okulula esikweletini njengoba kunezinto eziningi umbolekisi azicabangela ngaphambi kokunikeza isikweletu. Izici zifaka, kepha zingahle zingagcini lapho, imali yenkampani, inzuzo yenkampani, ubunikazi benkampani futhi okungenzeka kothishanhloko. Ababolekisi futhi bavame ukucabanga ngempahla evikela imalimboleko. Ngakho-ke, iminyaka yenkampani akuyona ukuphela kwento futhi akufanele ibhekwe njengesici esikhulu ekutholeni izikweletu kwebhizinisi.
Uma iminyaka yobudala ye inkampani endala yamashalofu inika abanikazi amandla alula wokuthola imali yebhizinisi, kungahle kube yinto encane, uma kungenjalo. Izici ezinesisindo esikhulu ngokwedlulele zivame ukuba ngamava wabasebenzi abamqoka necebo lebhizinisi elinengqondo kanye nekhono labaphathi bokuxhumana ngempumelelo nokuhlinzeka ngokusekelwa kokusebenza kwecebo.
Isazi esinolwazi esisebhizinisini lokuthatha izinkampani esidlangalaleni sisazisile ukuthi ukhetha ukusebenzisa izinkampani ezisebenza emashalofini esikhundleni sezinto ezintsha. Kodwa-ke, le yindaba yombono kuphela futhi ingahle ibe noma ngabe ayizuzisi kuzo zonke izimo kuwo wonke umuntu. Ngakho-ke siphakamisa ukufuna izeluleko zomthetho kulokhu kanye nezinye izingqinamba okuxoxwe ngazo lapha. Kunemibandela eqinile yezokuphepha, eyeKhomishini yokushintshanisa kanye nemigomo yokuphepha yezwe kanye nezidingo zokufayila eziphathelene nezinkampani zomphakathi futhi azicutshungulwa do-it- amaphrojekthi akho. Kungokuqonda ukuba nabameli abanolwazi abaqondisa inqubo yokuhamba komphakathi. Inkampani eseyindala iyodwa ngeke inikeze abanikazi ukufinyelela kumathuba wokutshala imali, noma njengoba kuxoxwe ngenhla, kungenzeka kunganikeli ngemikhawulo embalwa lapho kufakwa isicelo sesikweletu sebhizinisi.
Izinhlangano ezindala zamashalofu nama-LLC lapha zifaka izindatshana zokufakwa noma izindatshana zenhlangano nekhithi yophiko. Ikhithi yophiko iza ejwayelekile nendawo yokugcina amarekhodi enhlangano, imizuzu engenalutho yemihlangano, isethi evamile yemigwaqo yenkampani eyisisekelo, izitifiketi ezingenalutho nezingagunyaziwe noma isitifiketi sobulungu. Kungenzeka noma ingekho inombolo ye-ID yentela yenhlangano ekhona. Sigcizelela ukuthi izinkampani zisefomini yazo igobolondo asithengisi amasheya noma ezinye izibambiso. Kufanele zisetshenziselwe izinhloso zomthetho kuphela.
Amabhange nabanye ababolekisi abaningi bazodinga ubufakazi bokuthi inkampani yenze ibhizinisi ngokweqiniso futhi inenzuzo futhi inesikweletu ngaphambi kokukhipha isikweletu, hhayi nje ukuthi le nkampani ibikhona iminyaka ethile. Njengoba kushiwo ngenhla, ukuthatha inkampani kusuka esimweni esiyimfihlo, ukuya kwisimo esidayisiwe esidlangalaleni kudinga okungaphezu nje kokuthi le nhlangano ifakiwe isikhathi esithile. Kufaka imidwebo nezinye izidingo okumele zivunyelwe yiminyango kahulumeni nezinhlaka ezilawulayo. Inhlangano engenawo umlando webhizinisi kungenzeka, ngokwayo, ingakwazi ukuthola izinkontileka zikahulumeni kalula nje ngoba isikhona isikhashana esithile.
Akukho lutho lapha oluzothathwa njengokunikeza ukuthengisa izibambiso esifundazweni saseNevada noma esinye isimo noma izwe. Akukho okuthengisiwe noma okunikezwayo nganoma yisiphi inothi, isitoko, isibopho, isikweletu, ubufakazi bokuthi unesikweletu, isitifiketi senzalo noma ukubamba iqhaza esivumelwaneni sokwabelana ngenzuzo, inzalo yokubambisana enomkhawulo, intshisekelo yenkampani enesikweletu esilinganiselwe, ukuthembisana ngokubambisana isitifiketi, isitifiketi sokuhlela kabusha noma okubhaliselwe, isabelo esidlulayo, inkontileka yokutshalwa kwezimali, ukutshalwa kwezimali ngokuhlala, isitifiketi sokuvota, isitifiketi sediphozithi yezokuphepha, inzalo engafani nalutho emafutheni i-oyili, igesi noma okunye okuqashiwe lapho kukhishwa leyo mpahla ukuqashisa, okulungile noma okwasebukhosini, ukubeka, ukushaya ucingo, ukhiye noma inketho ekuvikelekeni, isitifiketi sediphozithi noma iqembu noma inkomba yokuphepha kufaka noma iyiphi inzalo kuyo noma ngokusekelwe kunani lanoma ikuphi kwangaphambilini, noma, ngokuvamile, inzalo noma insimbi eyaziwa kakhulu njengokuvikela noma yisiphi isitifiketi senzalo noma ukubamba iqhaza esitifiketini sesikhashana noma sesikhashana, irisidi, isiqinisekiso esiphelele noma esinqunyiwe sewaranti noma sokudla ukubhalisela ukuthenga noma yikuphi okwandulelayo njengoba kuchazwe ku-NRS 90.295.